I-intanethi iya isiba yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu.
Iprojekthi yakwaMozilla luluntu olusemhlabeni wonke abakholelwa kwelokuba ukungafihli nto, ukuqulunqa iindlela ezintsha, namathuba angundoqo kwinkqubela phambili yeIntanethi. Besisebenza kunye ukususela ngowe-1998 ekuqinisekiseni ukuba i-Intanethi iphuhliswa ngendlela yokuba kuxhamle wonke umntu. Saziwa ngcono ngokudala ibhrawuza yewebhu iMozilla Firefox.
Iprojekthi yeMozilla isebenzisa indlela yoluntu ekudaleni isoftwe ekudidi lwehlabathi evulekileyo nokuphuhlisa iintlobo ezintsha zemisebenzi yokubambisana. Sidala uluntu oluzibandakanya nokwenza amava e-Intanethi abe ngcono kuthi sonke.
Ngenxa yezi nzame, siye sabethelela imigaqo ethile esikholelwa ukuba ibalulekile ukuze i-Intanethi iqhubeke iyinzuzo eluntwini nakwezorhwebo. Sibeke le migaqo ingezantsi.
chaza umbono abanawo abathathi-nxaxheba beMozilla nge-Intanethi abafuna uMbutho weMozilla iwuphumeze;
sithethe nabantu nokuba banalo okanye abanalo ufifi ngezobugcisa;
senza abo banegalelo kwiMozilla bazidle ngoko sikwenzayo baze basikhuthaze ukuba siqhubeke; kunye
sinika abantu inkqubo yokuba baqhubele phambili nalo mbono weIntanethi.
Le migaqo ayisoze iziqhube ngokwayo. Kufuneka abantu ukwenza i-Intanethi ivulekele wonke umntu yaye wonke ubani abe nenxaxheba kuyo - abantu ngabanye, abo basebenza kunye njengamaqela, kwanabo bakhokela abanye. UMbutho weMozilla uzibophelele ekuqhubeleni phambili imigaqo echazwe kuXwebhu lwakwaMozilla. Simema abanye ukuba bazimanye nathi ekwenzeni i-Intanethi ibe ngcono ngakumbi kumntu wonke.
I-Intanethi yinxalenye ebalulekileyo yobomi bezi mini—undoqo kwezemfundo, unxibelelwano, intsebenziswano, ushishino, ulonwabo nakuluntu xa lulonke.
I-Intanethi ngumthombo woluntu oluncedo kwihlabathi lonke ofanele uhlale uvulekile yaye ufikeleleka.
I-intanethi kufuneka ixhobise ubomi bomntu ngamnye.
Abantu nokukhuseleko kwi-Intanethi lubalulekile yaye alunakuthathwa njengonto engenamsebenzi.
Abantu kufuneka babe nobugcisa bokumisela i-intanethi kwanamava abo kwi-intanethi.
Ukusebenza kwe-Intanethi njengomthombo woncedo woluntu kuxhomekeke kwintsebenziswano (iiprothokholi, iifomati zeengcombolo, umbandela), ukuqulunqwa kweendlela ezintsha nokuthatha inxaxheba kwiindawo ngeendawo zehlabathi.
Isoftwe yasimahla nevulekileyo ikhuthaza uphuhliso lwe-Intanethi njengomthombo woncedo loluntu.
Inkqubo zoluntu ezingenamagumgedle zikhuthaza ukuthatha inxaxheba, ukuphendula, nokuthenjwa.
Ubandakanyeko kwezorhwebo kuphuhliso lweintanethi luzisa inzuzo; ulungelelwano phakathi kwengeniso yezorhwebo nenzuzo kuluntu lubalulekile.
Ukubalaselisa inzuzo kawonke-wonke ye-Intanethi yeyona nto ibalulekileyo, efanele ixesha, ingqalelo nokuzinikela.
Ukuqhubela phambili uXwebhu lweMozilla
Kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokuqhubela phambili imigaqo yoXwebhu lweMozilla. Siyayamkela imisebenzi eyahlukeneyo, yaye silindele ubuchule obufana nobo bubonakaliswe ngabathathi-nxaxheba bakwaMozilla kwezinye iinkalo zeprojekthi. Kubantu abangabandakanyekanga kakhulu kwiprojekthi yeMozilla, indlela ephambili neyimpumelelo yokuxhasa uXwebhu kukusebenzisa iMozilla Firefox equluthe imigaqo yolu Xwebhu.
Nesifundo soMbutho weMozilla
UMbutho weMozilla ufungile ukuba uza kuxhasa uXwebhu lweMozilla kwimisebenzi yawo. Ingakumbi, siza:
sakha yaye sivulela ubugcisa obuvulekileyo nobokuncokola obuxhasa imigaqo yoXwebhu;
sakha yaye sihambisa iimveliso ezisemagqabini zabathengi abaxhasa imigaqo yoXwebhu;
kusebenzisa izinto zeMozilla (izinto ezifana namalungelo ekopi neempawu zorhwebo, iziseko zophuhliso, iimali, negama lethu) ukugcina i-Intanethi iliqonga elivulekileyo;
ukukhuthaza iindella zokudala ixabiso loqoqosho ukuze kuzuze uluntu; kunye
sikhuthaza imigaqo yoXwebhu lweMozilla kwiintetho zasesidlangalaleni kwanakwi-Intanethi.
Eminye yemisebenzi yoMbutho—sithethanje ekukudala, ukuhambisa nokukhuthaza iimveliso zabathengi—yenziwa ngokuyintloko ngoMbutho weMozilla ephantsi kweMozilla Corporation.
UMbutho weMozilla umele bonke abanye abantu abaxhasa imigaqo yoXwebhu lweMozilla ukuba bazimanye nathi, baze bafumane iindlela ezintsha zokwenza umbono we-Intanethi ube yimpumelelo.
Ulwimi Ulwimi Afrikaans aragonés عربي Asturianu Беларуская Български বাংলা Bosanski Català Maya Kaqchikel Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Dolnoserbšćina Ελληνικά English (Canadian) English (British) English Esperanto Español (de Argentina) Español (de Chile) Español (de España) Español (de México) Euskara فارسی suomi Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego Avañe'ẽ ગુજરાતી (ભારત) हिन्दी (भारत) Hrvatski Hornjoserbsce magyar Interlingua Bahasa Indonesia íslenska Italiano 日本語 ქართული Taqbaylit ខ្មែរ 한국어 Lietuvių Македонски മലയാളം मराठी Melayu Norsk bokmål Nederlands Norsk nynorsk ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) Polski Português (do Brasil) Português (Europeu) rumantsch Română Русский slovenčina Slovenščina Soŋay Shqip Српски Svenska தமிழ் ไทย Türkçe Triqui Українська Oʻzbek tili Tiếng Việt isiXhosa 中文 (简体) 正體中文 (繁體)